ကားဘီး Wheel Balance မညီတော့ဘူးဆိုရငျ ဖွဈနိုငျတဲ့ ကားတုနျခါမှု နှငျ့ ဆကျစပျရောဂါလက်ခဏာမြား - Myanmar Automobile and Equipment Directory
ကားဘီးတှရေဲ. Alignment (အလိုငျးမငျ့) မညီတော့ဘူးဆိုရငျ ကားတာယာတှေ တခွမျးစီ မညီမညာ စားသှားတာ ၊ ကားမောငျးနတေဲ့အခြိနျ တဖကျကို ဆှဲသှားတာ အစရှိတဲ့ ရောဂါလက်ခဏာတှကေိုတော့ တျောတျောမြားမြားလညျးကွုံဖူး ကွားဖူးကွပါတယျ ၊ ဒါ့အပွငျ ကားအောကျပိုငျးမှာရှိတဲ့ ဆကျစပျပစ်စညျးတှေ ဖွုတျတပျပွုပွငျလဲလှယျပွီးတဲ့ အခါမြိုးမှာလညျး ကား အလိုငျးမငျ့ ခြိနျကွရတာလညျး ကားမောငျးသူတိုငျးလိုလို သိကွပွီး အမွဲ သတိထားပွုပွငျထိနျးသိမျးကွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒီနေ. ပွောပွခငျြတဲ့ Wheel Balance ဆိုတဲ့ အကွောငျးကိုတော့ ကားမောငျးသူတျောတျောမြားမြား သတိမထားမိကွပါဘူး ၊ ဒီ Wheel Balance ဆိုတာလေးကလညျး ကားမောငျးနသေူတှနေဲ. ကားရဲ. အန်တရာယျကငျးရှငျးမှုအတှကျ ဘယျလောကျအရေးပါတယျဆိုတာလေး ပွောပွခငျြပါတယျ ။
Wheel Balance ဆိုတာဘာလဲ ?
Wheel Balance ဆိုတာကတော့ ကားတစီး အရှိနျပွငျးပွငျးနဲ. မောငျးနှငျနတေဲ့အခြိနျမှာ ၊ ကားဘီးမှာ တပျဆငျထားတဲ့ ကားခှေ ( သံ ၊ စတီး ၊ အလှိုငျး ) နဲ. ကားတာယာ တို. နှဈခု တခုနဲ. တခု ဟနျခကျြညီညီ အခြိုးကကြ လညျပတျနိုငျဖို. အဓိက လိုအပျတဲ့ အရာတခုဖွဈပါတယျ ။ ဒီလိုပွောရငျ ကားဘီးခှနေဲ. ကားတာယာ fitting ကအြောငျ တပျထားတာပဲ ဘာဖွဈလို. အခြိုးကကြ မလညျရမှာလဲလို. ထငျမွငျစရာရှိပါတယျ ။
တကယျတော့ ကားကို အရှိနျပွငျးပွငျးနဲ. မောငျးနှငျနတေဲ့ အခြိနျမှာ ကားဘီးနဲ. တာယာဟာ အခြိုးကကြ ကာရံညီညီ မလညျပတျတဲ့ အခါမြိုးတှရှေိပါတယျ ၊ ဒီလို အရာကို ကနြျောတို. မကျြစီနဲ.မမွငျနိုငျ မခနျ.မှနျးနိုငျပါဘူး ။ဒါဘာကွောငျ့ဖွဈရတာလဲဆိုရငျတော့ အရာဝတ်ထုတှလေညျပတျတဲ့အခါမှာ ဖွဈပျေါလာတဲ့ ဗဟိုခှာအား (Centrifugal Force) ကွောငျ့ဖွဈပျေါလာရတာပါ ။ ဗဟိုခှာအားဆိုတာကတော့ အရာဝတ်ထုတခုခုက လညျပတျတဲ့အခါမှာ လညျပတျနတေဲ့ အရာဝတ်ထုရဲ. အလညျဗဟိုခကျြကနေ အပွငျဖကျဆီကို အားတှပွေနျ.ကားထှကျလာတဲ့သဘောလို. အကွမျးမဉျြးမှတျယူလို.ရပါတယျ ။
အဲ့ဒီလို ဗဟိုခကျြတခုကနေ လညျပတျနတေဲ့ ဘယျအရာမဆို တညျတညျငွိမျငွိမျလညျပတျဖို.အတှကျ လညျပတျနတေဲ့ အရာဝတ်ထုတှရေဲ. အလေးခြိနျ အနိမျ့အမွငျ့တှေ အခြိုးညီနမှေရပါမယျ ။ အဲ့ဒီလိုမှ မဟုတျဘူး ၊ ဗဟိုခကျြတခုကနေ လညျပတျနတေဲ့ အရာဝတ်ထုတှကေ အခြိုးအစားတှေ မညီဘူး အနိမျ့အမွငျ့တှေ မညီဘူး ၊ အလေးခြိနျတှေ မတူညီဘူးဆိုရငျတော့ ဗဟိုခှာအားဆိုတဲ့ ရူပဗဒေသဘောတရားအရ အဲ့ဒီအရာဝတ်ထုတှကေ တညျတညျငွိမျငွိမျ မလညျပတျနိုငျတော့ဘဲ တုနျခါမှုတှေ ဖွဈပျေါစတေော့မှာပါ ။ ဒီလိုသဘောတရားကနေ Wheel Balance ဆိုတဲ့ သဘောတရားပျေါပေါကျလာရတာပါ ။
Wheel Balance ဘာကွောငျ့ မဖွဈရတာလဲ ?
ကနြျောတို. လကျရှိအသုံးပွုနတေဲ့ ကားတှမှော တပျဆငျထားတဲ့ကားဘီးဂှနေဲ. ကားတာယာတှကေို Wheel Balance ခြိနျပေးရတာမြိုးကလညျး ဒါကွောငျ့ပါပဲ ၊ ကားတာယာနဲ.ဂှတှေယော ဘယျလောကျအဆငျ့မွငျ့တဲ့ နညျးပညာတှသေုံးပွီး ထုတျလုပျထားသညျဆိုပါစေ ၊ Molding ဆိုတဲ့ မိုသှနျးလောငျးတဲ့နရောမှာဖွဈစေ ၊ သံသား ၊ သတ်ထုအသား အစရှိတာတှကွေောငျ့ဖွဈစေ ၊ ကားရဲ.ဝနျ ဝိတျကို ထမျးသှားရငျးနဲ.ဖွဈစေ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ တနရောရာမှာ အလေးခြိနျလြော့နညျးနတော ၊ ပါးနတော ၊ လိမျနတော ၊ ခြိုငျ့နတော မြိုးတှရှေိပါတယျ ။ ဒီလိုအားနညျးခကျြတှနေဲ. ကားရဲ. အရှိနျမွနျတာနဲ. ပေါငျးလိုကျတဲ့ အခါမှာတော့ Wheel unbalance တှဖွေဈပျေါလာပွီး အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့ ရူပဗဒေသဘောတရားအရ တုနျခါမှုတှေ ဖွဈပျေါလာရတော့တာပါပဲ ။ ဒီလိုတုနျခါမှုတှကေ သာမာနျတုနျခါရုံနဲ. ပွီးမသှားဘဲ ကားအောကျပိုငျးနဲ. ကားရဲ. အန်တရာယျကငျးရှငျးရေးတှကေိုပါ အနှောကျအယှကျပေးတော့တာပါပဲ ။
Wheel Balance မညီတော့ဘူးဆိုရငျ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ ရောဂါလက်ခဏာမြား
1. ဆိုးဆိုးရှားရှား တုနျခါတာမြိုး
ဒါမြိုးဘယျအခြိနျမှာ ဖွဈလာတတျသလဲဆိုရငျတော့ ကီလို ၆၀ (ဝါ) ၇၀ နှုနျးနဲ.မောငျးနှငျနတေဲ့အခြိနျ ( တခြို.ကားတှမှောတော့ ကီလို ၁၀၀ နဲ.အထကျ ) မောငျးနတေဲ့အခြိနျမြိုးမှာဖွဈတတျတာပါ ။ ကားလမျးတှကေလညျး ညီညီညာညာနဲ.ကောငျးနရေဲ.သား ၊ ကားရဲ. အောကျပိုငျးကနေ စတီယာရငျ ဂှအေထိ ဆိုးဆိုးရှားရှားခါရမျးတုနျခါခငျြတာမြိုး ၊ ကားကို ဘယျဖကျ ညာဖကျ တဖကျဖကျဆီကို ဆှဲခသြလိုမြိုး ခံစားလာရတယျဆိုရငျ အဲဒါ ကားရဲ. Wheel Balance မညီညာတော့ဘူးဆိုရငျ ဖွဈတတျတဲ့ သဘောတရားပါ ။ ကားအရှိနျတိုးလာလလေေ ပွငျးထနျတဲ့ တုနျခါမှု ဖွဈလာလလေပေါ ။
တခါတရံမှာတော့ ကားအရှိနျလြော့နတေဲ့အခြိနျမှာ သိသိသာသာ တုနျခါမှုဖွဈပျေါပွီး ၊ ကားအရှိနျတငျလိုကျတဲ့ အခြိနျမြိုးမှာ တုနျခါမှုမရှိတော့ဘဲ တညျငွိမျသှားတာမြိုးလညျးဖွဈတတျပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ကားအရှိနျလြော့နတေဲ့ အခြိနျ သိသိသာသာ တုနျခါနတေဲ့ ကားကို အရှိနျမွှငျ့မောငျးတဲ့သူ ရှားပါးမယျလို.တော့ ထငျပါတယျ ။ နောကျတခကျြက ဘရိတျနငျးလိုကျတဲ့ အခြိနျ ၊ ဘရိနျမှေးလိုကျတဲ့ အခြိနျမြိုးမှာ ကားစတီယာရငျကို လာတိုးပွီး တုနျခါမှုဖွဈစတောမြိုးကလညျး ကားရဲ. Wheel Balance မညီညာတော့တဲ့ ပွဿနာဖွဈတတျပါတယျ ။
တကယျတော့ Cupped Wear ကိုပွောတာ ၊ မွနျမာလို. အနီးစပျဆုံးပွောရရငျတော့ ထိပျကှကျသှားတာ ၊ တာယာ အကှကျလိုကျအကှကျလိုကျဖွဈတာကို ဆိုလိုတာပါ ။ ပုံမှနျ အလိုငျးမငျ့ မှနျ Balance မှနျနတေဲ့ ကားတာယာရဲ. ပနျးတှဟော ပုံမှနျညီညာ ညာညာ ပှနျးစားရမှဖွဈပမေယျ့ ၊ အလိုငျးမငျ့မမှနျတာကွောငျ့ တာယာ တခွမျးစားသှားတာ ၊ ကားအောကျပိုငျး ပစ်စညျးတှေ ခြို.ယှငျးမှုကွောငျ့ ပှနျးစားတာတှနေဲ. ဒီ Wheel Balance မညီမြှမှုကွောငျ့ဖွဈတဲ့ တာယာပှနျးစားမှုတှကေ ကွညျ့ရငျ သိသိသာသာ ကှဲပွားပါတယျ ။
ပုံမှနျအားဖွငျ့ လပေေါငျခြိနျညီညီနဲ. ထိုးထားတဲ့ တာယာတလုံးဟာ ကားရဲအလေးခြိနျဝိတျကို တူညီစှာထမျးပိုးထားရတာမို. ကားတာယာနဲ.မွပွေငျထိတှေ.ပှတျတိုကျမှုတိုငျး တူတူညီညီမြှမြှတတ ခံစားရမှာ ဖွဈပွီး ညီညီညာညာ ပနျးတှေ ပှနျးစား ကုနျဆုံးရမှာပါ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလို Wheel Balance မညီမြှတဲ့ တာယာတှမှောတော့ ကားဟာ အရှိနျနဲ. လညျပတျလလေေ ကားတာယာနဲ. မွပွေငျပှတျတိုကျမှုတှကေ မညီမညာဖွဈလဖွေဈပွီး ထိတဲ့အပိုငျးတှကေ ထိ ၊ မထိတဲ့ အပိုငျးတှကေ မထိဘဲ ၊ ထိတှေ.မှုမြားမြားခံရတဲ့ အပိုငျးတှကေ ကားတာယာတှကေို ဟိုတကှကျ ဒီတကှကျ ထိပျကှကျတှဖွေဈပျေါစတောပါ ။ မွငျသာထငျသာအောငျပွောရရငျတော့ ကားဘီးဟာ မွနျလှနျးလို.သာ လညျတယျထငျနရေတာ တကယျဆို မလညျဘဲ ခုနျခုနျသှားနသေလိုမြိုးဖွဈတာပါ ။
ကားတာယာတှရေဲ. တညျဆောကျပုံ ဒီဇိုငျးတှအေရ ပှနျးစားကှကျသှားတဲ့နရောတှဟော ကားရဲ. ဖိအားတှေ ၊ Stress တှကေို ခံနိုငျရညျ နညျးသှားပွီး အခြိနျမရှေး တာယာပေါကျတာ တာယာကှဲတာတှေ ဖွဈပျေါလာနိုငျပါတယျ ။ အမွနျလမျးမှာ ကားအရှိနျနဲ.သှားနခြေိနျ ကားတာယာပေါကျတာ ကှဲတာ ဘယျလိုအန်တရာယျမြားတယျဆိုတာကတော့ ရှငျးပွဖို. လိုမယျမထငျတော့ပါဘူး ။
3. စတီယာရငျ (Steering) တုနျခါတာ
ကားရဲ. ဘီးတှေ ဘယျညာ ကှေ.နိုငျခေါကျနိုငျဖို. စတီယာရငျနဲ. ခြိတျဆကျထားပွီး လိုသလို ထိနျးခြုပျနိုငျပွုလုပျထားတာမို. ၊ ကားရဲ. ဘီးတှနေဲ. စတီယာရငျရဲ. ဆကျသှယျခကျြက အတျောလေးကို ကွီးမားပါတယျ ။ အပျေါမှာ ပွောခဲ့သလိုပဲ Wheel Balance မညီညာမှုတှကွေောငျ့ ကားဘီး တှေ တုနျခါမှုဖွဈတဲ့အခါမှာလညျး အဲ့ဒီတုနျခါမှုတှကေ စတီယာရငျဆီကို တိုကျရိုကျ အကြိုးသကျရောကျ မှုတှဖွေဈပျေါစပေါတယျ ။
ဒီလိုနရောမှာ ကားစတီယာရငျမှာ ဖှဲ.စညျးထားတဲ့ ပစ်စညျးအစိတျအပေါငျးတှရေဲ. ခြို.ယှငျးခကျြတှကွေောငျ့ ကားစတီယာရငျတုနျခါမှုတှဖွေဈပျေါတတျပါတယျ ၊ ဥပမာ ကားစတီယာရငျ ဂမျးဘှတျခြောငျတာမြိုးတှကွေောငျ့ လမျးကွမျးကွမျးမောငျးတဲ့အခါ ၊ ဂုတျဂုတျမညျတာ ၊ ဒါမှမဟုတျ စတီယာရငျ ဆီမရှိလို. စတီယာရငျ ပနျ.(Pump) ညီးတာ ၊ ဘယျညာခေါကျတဲ့အခြိနျ စတီယာရငျလေးပွီး ခါတာ ၊ ဆှဲတာ တှကေလညျး ကားစတီယာရငျနဲ. ဆကျစပျပစ်စညျးတှေ မကောငျးရငျ ဖွဈတတျတာမြိုးပါ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီ ကား Wheel Balance တှမေညီညာမှုကွောငျ့ဖွဈတာမြိုးကတော့ အပျေါက အခကျြတှနေဲ. ကှဲပွားပွီး ကားကို တညျတညျငွိမျငွိမျနဲ. မောငျးနတေဲ့ အခြိနျမြိုးတှမှော ၊ နောကျ ကားလမျးညီညီညာညာ ဖွဈနတေဲ့ အခြိနျမြိုးတှမှော ၊ နောကျ ပုံမှနျ အရှိနျနညျးနညျးနဲ.မောငျးနခြေိနျ မဖွဈဘဲ အရှိနျမွငျ့မောငျးလိုကျတဲ့ အခြိနျမြိုးတှမှော ထဖွဈတာကမှ Wheel Balance ပွဿနာလို. ဆိုနိုငျတာပါ ။
4. ရှော့ဘား (Shock Absorber), Hub Ball နဲ. အောကျပိုငျးဆကျစပျပစ်စညျးတှေ ပကျြစီးတာ
ကားတာယာရယျ ဂှရေယျနဲ. အဓိက ခြိတျဆကျထားတဲ့ ပစ်စညျးတှကေ ဟကျဘောအထိုငျတှရေယျ သူတို.ရဲ.အပျေါမှာ ကားရဲ. ဝိတျကို ထမျးထားတဲ့ ကားရဲ. Compression နဲ. Tension ကို အဓိက ထိနျးညှိပေးတဲ့ ရှော့ဘားတှရေယျလညျး ဒီ Wheel Balance မညီမညာဖွဈတာကို မပွုပွငျဘဲ ကာလတာရှညျထားမယျဆိုရငျ အလှယျတကူပကျြစီးပါလိမျ့မယျ ။ မလိုအပျတဲ့ ကားဘီးတုနျခါမှုတှေ ၊ ခုနျသလိုဖွဈနတောတှကွေောငျ့ Impact Load တှဖွေဈပျေါလာပွီး ကားအောကျပိုငျးဆကျစပျပစ်စညျးတှကေို ထိခိုကျစနေိုငျတာပါ ။
အထူးသဖွငျ့ အဝေးပွေးလမျးမှအခွအေနတှေမှောပါ ၊ တခြို.လညျး မွို.တှငျး ပုံမှနျအရှိနျနဲ. သှားနတောမြိုးမှာလညျး တာယာ Wheel Balance မညီမြှမှုတှကွေောငျ့ လညျး ကားဆီ ပိုစား လာတာ တှဖွေဈတတျပါတယျ ။ ကားလပေေါငျ မညီမြှတာ ၊ ကားအလိုငျးမငျ့ မညီမြှတာတှကွေောငျ့ ဆီပိုစားသလိုပါပဲ ။
ကားဘီး Wheel Balance မညီညာတဲ့အခါ ကားကို လိုသလို အရှိနျတငျတဲ့အခြိနျမြိုးတှမှော ကားရဲ. ဘီးတှကေ ညီညီညာညာ လညျပတျခွငျးမရှိတာကွောငျ့ လိုအပျတဲ့ အရှိနျရရှိဖို. ကားအငျဂငျြရုနျးအား ပိုမို လိုအပျလာပါတယျ ။ ကားအငျဂငျြမလိုအပျဘဲ ပိုရုနျးရတဲ့အခါ ဆီပိုစားလာတာဟာ သဘာဝပါပဲ ။ ကား Wheel Balance ခြိနျတာတှကေတော့ Static Balance နဲ. Dynamic Balance ဆိုပွီး နှဈမြိုးကှဲပွားပွီး Static Balance ဆိုတာကတော့ ကားဂှေ (Rim) နဲ. ကားတာယာ အပျေါအောကျ မညီညာမှုတှကေို ခြိနျညှိတာဖွဈပွီး ၊ Dynamic Balance ဆိုတာကတော့ တာယာနဲ. ဂှဘေေးတိုကျ အနအေထား လိမျဖယျစောငျးနတောမြိုးတှကေို ခြိနျညှိတာလို. ယဘေူယနြားလညျမှတျသားနိုငျပါတယျ ။ အထူးသဖွငျ့ ကား Wheel Balance Counter Weight တုံးတှကေို အသုံးပွုပွီး လိုအပျတဲ့ နရောမှာ ဝိတျတုံးတှကေို အစားထိုး အလေးခြိနျအဖွဈ ထညျ့သှငျးခွငျးဖွငျ့ ကားရဲ. ဗဟိုခှာအား (Centrifugal Force) ကို တညျတညျငွိမျငွိမျဖွဈအောငျ ထိနျးညှိပေးရတာပါ ။ ဈေးကှကျထဲမှာတော့ ကား Wheel Balance ဝိတျတုံးတှကေို gram, Lb (pound) အစရှိသဖွငျ့ ဝယျယူရရှိနိုငျပွိး Weight တုံးတှရေဲ. အမြိုးအစားနဲ. ထုတျလုပျတဲ့ နိုငျငံ ၊ အရညျအသှေးတှပေျေါမူတညျပွီး ဈေးနှုနျးအနိမျ့အမွငျ့ကှာခွားပါတယျ ။
ဒီအခကျြတှကေ ကားဘီး Wheel Balance မညီတဲ့အခါ ဖွဈနိုငျတဲ့ အခွအေနတှေပေါ ။ ဒီလိုအခွအေနတှေကေ ကားဘီး Wheel Balance မညီတဲ့အခါမှသာမက တာယာလိမျနတောမြိုးစတဲ့ အခွအေနတှေမှောလညျး ဒီလို အလားတူ ရောဂါလက်ခဏာတှပွေတတျပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ ဒီလို ရောဂါလက်ခဏာတှကွေုံတှလောရတယျဆိုရငျ အလှယျဆုံး ကားတာယာကို ကိုယျတိုငျကွညျ့ပွီး စဈဆေးကွညျ့တာမြိုးနဲ. ခတျေမီကား Wheel Balance ခြိနျစကျတှနေဲ. ဘီးတဘီးခငျြးဆီကို တိုငျးတာစဈဆေးပွုပွငျသငျ့တာပါ ။
ကား Wheel Balance မညီညာတာဟာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပွဿနာလေးလို.ထငျရပမေယျ့ ၊ ကားကို အမွနျလမျးလိုနရောမြိုးမှာ အရှိနျနဲ. မောငျးနှငျနတေဲ့အခြိနျ ကားဘီးတှရေဲ. Wheel Balance မညီမြှမှုကွောငျ့ ကားမောငျးသူရော ၊ ကားရော အန်တရာယျရှိတဲ့ အခွအေနနေဲ. ကွုံတှလောရနိုငျပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ ဒီလို ရောဂါလက်ခဏာတှေ ကွုံတှလောရတယျဆို ကားအောကျပိုငျး ပစ်စညျးတှကေို စဈဆေးပွုပွငျတာ ၊ ကား အလိုငျးမငျ့ခြိနျတာ ၊ ကားလပေေါငျခြိနျတာတှအေပွငျ ၊ Wheel Balance တှကေိုလညျး သခြော ဂရုတစိုကျ မမမေ့လြှော့စဈဆေးသငျ့ပါတယျလို. အကွံပွုတငျပွလိုကျရပါတယျ ။
စာဖတျသူ မိတျဆှညေီကို မောငျနှမမြားအားလုံး နညျးပညာ ဗဟုသုတ ကွှယျဝွပီး အန်တရာယျ ကငျးဘေးရှငျးကွပါစေ။
ကားဘီး Wheel Balance မညီတော့ဘူးဆိုရင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ ကားတုန်ခါမှု နှင့် ဆက်စပ်ရောဂါလက္ခဏာများ
ကားဘီးတွေရဲ. Alignment (အလိုင်းမင့်) မညီတော့ဘူးဆိုရင် ကားတာယာတွေ တခြမ်းစီ မညီမညာ စားသွားတာ ၊ ကားမောင်းနေတဲ့အချိန် တဖက်ကို ဆွဲသွားတာ အစရှိတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုတော့ တော်တော်များများလည်းကြုံဖူး ကြားဖူးကြပါတယ် ၊ ဒါ့အပြင် ကားအောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ ဖြုတ်တပ်ပြုပြင်လဲလှယ်ပြီးတဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း ကား အလိုင်းမင့် ချိန်ကြရတာလည်း ကားမောင်းသူတိုင်းလိုလို သိကြပြီး အမြဲ သတိထားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းကြပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဒီနေ. ပြောပြချင်တဲ့ Wheel Balance ဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုတော့ ကားမောင်းသူတော်တော်များများ သတိမထားမိကြပါဘူး ၊ ဒီ Wheel Balance ဆိုတာလေးကလည်း ကားမောင်းနေသူတွေနဲ. ကားရဲ. အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုအတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာလေး ပြောပြချင်ပါတယ် ။
Wheel Balance ဆိုတာ ဘာလဲ ?
Wheel Balance ဆိုတာကတော့ ကားတစီး အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ. မောင်းနှင်နေတဲ့အချိန်မှာ ၊ ကားဘီးမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ကားခွေ ( သံ ၊ စတီး ၊ အလွိုင်း ) နဲ. ကားတာယာ တို. နှစ်ခု တခုနဲ. တခု ဟန်ချက်ညီညီ အချိုးကျကျ လည်ပတ်နိုင်ဖို. အဓိက လိုအပ်တဲ့ အရာတခုဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလိုပြောရင် ကားဘီးခွေနဲ. ကားတာယာ fitting ကျအောင် တပ်ထားတာပဲ ဘာဖြစ်လို. အချိုးကျကျ မလည်ရမှာလဲလို. ထင်မြင်စရာရှိပါတယ် ။
တကယ်တော့ ကားကို အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ. မောင်းနှင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကားဘီးနဲ. တာယာဟာ အချိုးကျကျ ကာရံညီညီ မလည်ပတ်တဲ့ အခါမျိုးတွေရှိပါတယ် ၊ ဒီလို အရာကို ကျနော်တို. မျက်စီနဲ.မမြင်နိုင် မခန်.မှန်းနိုင်ပါဘူး ။ ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်တော့ အရာဝတ္ထုတွေလည်ပတ်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဗဟိုခွာအား (Centrifugal Force) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတာပါ ။ ဗဟိုခွာအားဆိုတာကတော့ အရာဝတ္ထုတခုခုက လည်ပတ်တဲ့အခါမှာ လည်ပတ်နေတဲ့ အရာဝတ္ထုရဲ. အလည်ဗဟိုချက်ကနေ အပြင်ဖက်ဆီကို အားတွေပြန်.ကားထွက်လာတဲ့သဘောလို. အကြမ်းမျဉ်းမှတ်ယူလို.ရပါတယ် ။
အဲ့ဒီလို ဗဟိုချက်တခုကနေ လည်ပတ်နေတဲ့ ဘယ်အရာမဆို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လည်ပတ်ဖို.အတွက် လည်ပတ်နေတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေရဲ. အလေးချိန် အနိမ့်အမြင့်တွေ အချိုးညီနေမှရပါမယ် ။ အဲ့ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘူး ၊ ဗဟိုချက်တခုကနေ လည်ပတ်နေတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေက အချိုးအစားတွေ မညီဘူး အနိမ့်အမြင့်တွေ မညီဘူး ၊ အလေးချိန်တွေ မတူညီဘူးဆိုရင်တော့ ဗဟိုခွာအားဆိုတဲ့ ရူပဗေဒသဘောတရားအရ အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် မလည်ပတ်နိုင်တော့ဘဲ တုန်ခါမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေတော့မှာပါ ။ ဒီလိုသဘောတရားကနေ Wheel Balance ဆိုတဲ့ သဘောတရားပေါ်ပေါက်လာရတာပါ ။
Wheel Balance ဘာကြောင့် မဖြစ်ရတာလဲ ?
ကျနော်တို. လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ကားတွေမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ကားဘီးဂွေနဲ. ကားတာယာတွေကို Wheel Balance ချိန်ပေးရတာမျိုးကလည်း ဒါကြောင့်ပါပဲ ၊ ကားတာယာနဲ.ဂွေတွေယာ ဘယ်လောက်အဆင့်မြင့်တဲ့ နည်းပညာတွေသုံးပြီး ထုတ်လုပ်ထားသည်ဆိုပါစေ ၊ Molding ဆိုတဲ့ မိုသွန်းလောင်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်စေ ၊ သံသား ၊ သတ္ထုအသား အစရှိတာတွေကြောင့်ဖြစ်စေ ၊ ကားရဲ.၀န် ဝိတ်ကို ထမ်းသွားရင်းနဲ.ဖြစ်စေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တနေရာရာမှာ အလေးချိန်လျော့နည်းနေတာ ၊ ပါးနေတာ ၊ လိမ်နေတာ ၊ ချိုင့်နေတာ မျိုးတွေရှိပါတယ် ။ ဒီလိုအားနည်းချက်တွေနဲ. ကားရဲ. အရှိန်မြန်တာနဲ. ပေါင်းလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ Wheel unbalance တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီး အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ ရူပဗေဒသဘောတရားအရ တုန်ခါမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရတော့တာပါပဲ ။ ဒီလိုတုန်ခါမှုတွေက သာမာန်တုန်ခါရုံနဲ. ပြီးမသွားဘဲ ကားအောက်ပိုင်းနဲ. ကားရဲ. အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတွေကိုပါ အနှောက်အယှက်ပေးတော့တာပါပဲ ။
Wheel Balance မညီတော့ဘူးဆိုရင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများ
1. ဆိုးဆိုးရွားရွား တုန်ခါတာမျိုး
ဒါမျိုးဘယ်အချိန်မှာ ဖြစ်လာတတ်သလဲဆိုရင်တော့ ကီလို ၆၀ (ဝါ) ၇၀ နှုန်းနဲ.မောင်းနှင်နေတဲ့အချိန် ( တချို.ကားတွေမှာတော့ ကီလို ၁၀၀ နဲ.အထက် ) မောင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဖြစ်တတ်တာပါ ။ ကားလမ်းတွေကလည်း ညီညီညာညာနဲ.ကောင်းနေရဲ.သား ၊ ကားရဲ. အောက်ပိုင်းကနေ စတီယာရင် ဂွေအထိ ဆိုးဆိုးရွားရွားခါရမ်းတုန်ခါချင်တာမျိုး ၊ ကားကို ဘယ်ဖက် ညာဖက် တဖက်ဖက်ဆီကို ဆွဲချသလိုမျိုး ခံစားလာရတယ်ဆိုရင် အဲဒါ ကားရဲ. Wheel Balance မညီညာတော့ဘူးဆိုရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောတရားပါ ။ ကားအရှိန်တိုးလာလေလေ ပြင်းထန်တဲ့ တုန်ခါမှု ဖြစ်လာလေလေပါ ။
တခါတရံမှာတော့ ကားအရှိန်လျော့နေတဲ့အချိန်မှာ သိသိသာသာ တုန်ခါမှုဖြစ်ပေါ်ပြီး ၊ ကားအရှိန်တင်လိုက်တဲ့ အချိန်မျိုးမှာ တုန်ခါမှုမရှိတော့ဘဲ တည်ငြိမ်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကားအရှိန်လျော့နေတဲ့ အချိန် သိသိသာသာ တုန်ခါနေတဲ့ ကားကို အရှိန်မြှင့်မောင်းတဲ့သူ ရှားပါးမယ်လို.တော့ ထင်ပါတယ် ။နောက်တချက်က ဘရိတ်နင်းလိုက်တဲ့ အချိန် ၊ ဘရိန်မှေးလိုက်တဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ကားစတီယာရင်ကို လာတိုးပြီး တုန်ခါမှုဖြစ်စေတာမျိုးကလည်း ကားရဲ. Wheel Balance မညီညာတော့တဲ့ ပြဿနာဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
တကယ်တော့ Cupped Wear ကိုပြောတာ ၊ မြန်မာလို. အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင်တော့ ထိပ်ကွက်သွားတာ ၊ တာယာ အကွက်လိုက်အကွက်လိုက်ဖြစ်တာကို ဆိုလိုတာပါ ။ ပုံမှန် အလိုင်းမင့် မှန် Balance မှန်နေတဲ့ ကားတာယာရဲ. ပန်းတွေဟာ ပုံမှန်ညီညာ ညာညာ ပွန်းစားရမှဖြစ်ပေမယ့် ၊ အလိုင်းမင့်မမှန်တာကြောင့် တာယာ တခြမ်းစားသွားတာ ၊ ကားအောက်ပိုင်း ပစ္စည်းတွေ ချို.ယွင်းမှုကြောင့် ပွန်းစားတာတွေနဲ. ဒီ Wheel Balance မညီမျှမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ တာယာပွန်းစားမှုတွေက ကြည့်ရင် သိသိသာသာ ကွဲပြားပါတယ် ။
ပုံမှန်အားဖြင့် လေပေါင်ချိန်ညီညီနဲ. ထိုးထားတဲ့ တာယာတလုံးဟာ ကားရဲအလေးချိန်ဝိတ်ကို တူညီစွာထမ်းပိုးထားရတာမို. ကားတာယာနဲ.မြေပြင်ထိတွေ.ပွတ်တိုက်မှုတိုင်း တူတူညီညီမျှမျှတတ ခံစားရမှာ ဖြစ်ပြီး ညီညီညာညာ ပန်းတွေ ပွန်းစား ကုန်ဆုံးရမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို Wheel Balance မညီမျှတဲ့ တာယာတွေမှာတော့ ကားဟာ အရှိန်နဲ. လည်ပတ်လေလေ ကားတာယာနဲ. မြေပြင်ပွတ်တိုက်မှုတွေက မညီမညာဖြစ်လေဖြစ်ပြီး ထိတဲ့အပိုင်းတွေက ထိ ၊ မထိတဲ့ အပိုင်းတွေက မထိဘဲ ၊ ထိတွေ.မှုများများခံရတဲ့ အပိုင်းတွေက ကားတာယာတွေကို ဟိုတကွက် ဒီတကွက် ထိပ်ကွက်တွေဖြစ်ပေါ်စေတာပါ ။ မြင်သာထင်သာအောင်ပြောရရင်တော့ ကားဘီးဟာ မြန်လွန်းလို.သာ လည်တယ်ထင်နေရတာ တကယ်ဆို မလည်ဘဲ ခုန်ခုန်သွားနေသလိုမျိုးဖြစ်တာပါ ။
ကားတာယာတွေရဲ. တည်ဆောက်ပုံ ဒီဇိုင်းတွေအရ ပွန်းစားကွက်သွားတဲ့နေရာတွေဟာ ကားရဲ. ဖိအားတွေ ၊ Stress တွေကို ခံနိုင်ရည် နည်းသွားပြီး အချိန်မရွေး တာယာပေါက်တာ တာယာကွဲတာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ် ။ အမြန်လမ်းမှာ ကားအရှိန်နဲ.သွားနေချိန် ကားတာယာပေါက်တာ ကွဲတာ ဘယ်လိုအန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာကတော့ ရှင်းပြဖို. လိုမယ်မထင်တော့ပါဘူး ။
3. စတီယာရင် (Steering) တုန်ခါတာ
ကားရဲ. ဘီးတွေ ဘယ်ညာ ကွေ.နိုင်ခေါက်နိုင်ဖို. စတီယာရင်နဲ. ချိတ်ဆက်ထားပြီး လိုသလို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြုလုပ်ထားတာမို. ၊ ကားရဲ. ဘီးတွေနဲ. စတီယာရင်ရဲ. ဆက်သွယ်ချက်က အတော်လေးကို ကြီးမားပါတယ် ။ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ Wheel Balance မညီညာမှုတွေကြောင့် ကားဘီး တွေ တုန်ခါမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်း အဲ့ဒီတုန်ခါမှုတွေက စတီယာရင်ဆီကို တိုက်ရိုက် အကျိုးသက်ရောက် မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် ။ ဒီလိုနေရာမှာ ကားစတီယာရင်မှာ ဖွဲ.စည်းထားတဲ့ ပစ္စည်းအစိတ်အပေါင်းတွေရဲ. ချို.ယွင်းချက်တွေကြောင့် ကားစတီယာရင်တုန်ခါမှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ် ၊ ဥပမာ ကားစတီယာရင် ဂမ်းဘွတ်ချောင်တာမျိုးတွေကြောင့် လမ်းကြမ်းကြမ်းမောင်းတဲ့အခါ ၊ ဂုတ်ဂုတ်မည်တာ ၊ ဒါမှမဟုတ် စတီယာရင် ဆီမရှိလို. စတီယာရင် ပန်.(Pump) ညီးတာ ၊ ဘယ်ညာခေါက်တဲ့အချိန် စတီယာရင်လေးပြီး ခါတာ ၊ ဆွဲတာ တွေကလည်း ကားစတီယာရင်နဲ. ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ မကောင်းရင် ဖြစ်တတ်တာမျိုးပါ ။
ဒါပေမယ့် ဒီ ကား Wheel Balance တွေမညီညာမှုကြောင့်ဖြစ်တာမျိုးကတော့ အပေါ်က အချက်တွေနဲ. ကွဲပြားပြီး ကားကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ. မောင်းနေတဲ့ အချိန်မျိုးတွေမှာ ၊ နောက် ကားလမ်းညီညီညာညာ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မျိုးတွေမှာ ၊ နောက် ပုံမှန် အရှိန်နည်းနည်းနဲ.မောင်းနေချိန် မဖြစ်ဘဲ အရှိန်မြင့်မောင်းလိုက်တဲ့ အချိန်မျိုးတွေမှာ ထဖြစ်တာကမှ Wheel Balance ပြဿနာလို. ဆိုနိုင်တာပါ ။
4. ရှော့ဘား (Shock Absorber), Hub Ball နဲ. အောက်ပိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ ပျက်စီးတာ
ကားတာယာရယ် ဂွေရယ်နဲ. အဓိက ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ဟက်ဘောအထိုင်တွေရယ် သူတို.ရဲ.အပေါ်မှာ ကားရဲ. ဝိတ်ကို ထမ်းထားတဲ့ ကားရဲ. Compression နဲ. Tension ကို အဓိက ထိန်းညှိပေးတဲ့ ရှော့ဘားတွေရယ်လည်း ဒီ Wheel Balance မညီမညာဖြစ်တာကို မပြုပြင်ဘဲ ကာလတာရှည်ထားမယ်ဆိုရင် အလွယ်တကူပျက်စီးပါလိမ့်မယ် ။ မလိုအပ်တဲ့ ကားဘီးတုန်ခါမှုတွေ ၊ ခုန်သလိုဖြစ်နေတာတွေကြောင့် Impact Load တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကားအောက်ပိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်တာပါ ။
အထူးသဖြင့် အဝေးပြေးလမ်းမှအခြေအနေတွေမှာပါ ၊ တချို.လည်း မြို.တွင်း ပုံမှန်အရှိန်နဲ. သွားနေတာမျိုးမှာလည်း တာယာ Wheel Balance မညီမျှမှုတွေကြောင့် လည်း ကားဆီ ပိုစား လာတာ တွေဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ကားလေပေါင် မညီမျှတာ ၊ ကားအလိုင်းမင့် မညီမျှတာတွေကြောင့် ဆီပိုစားသလိုပါပဲ ။ ကားဘီး Wheel Balance မညီညာတဲ့အခါ ကားကို လိုသလို အရှိန်တင်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ ကားရဲ. ဘီးတွေက ညီညီညာညာ လည်ပတ်ခြင်းမရှိတာကြောင့် လိုအပ်တဲ့ အရှိန်ရရှိဖို. ကားအင်ဂျင်ရုန်းအား ပိုမို လိုအပ်လာပါတယ် ။ ကားအင်ဂျင်မလိုအပ်ဘဲ ပိုရုန်းရတဲ့အခါ ဆီပိုစားလာတာဟာ သဘာဝပါပဲ ။
ကား Wheel Balance ချိန်တာတွေကတော့ Static Balance နဲ. Dynamic Balance ဆိုပြီး နှစ်မျိုးကွဲပြားပြီး Static Balance ဆိုတာကတော့ ကားဂွေ (Rim) နဲ. ကားတာယာ အပေါ်အောက် မညီညာမှုတွေကို ချိန်ညှိတာဖြစ်ပြီး ၊ Dynamic Balance ဆိုတာကတော့ တာယာနဲ. ဂွေဘေးတိုက် အနေအထား လိမ်ဖယ်စောင်းနေတာမျိုးတွေကို ချိန်ညှိတာလို. ယေဘူယျနားလည်မှတ်သားနိုင်ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် ကား Wheel Balance Counter Weight တုံးတွေကို အသုံးပြုပြီး လိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ ဝိတ်တုံးတွေကို အစားထိုး အလေးချိန်အဖြစ် ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ကားရဲ. ဗဟိုခွာအား (Centrifugal Force) ကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်အောင် ထိန်းညှိပေးရတာပါ ။ ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ ကား Wheel Balance ဝိတ်တုံးတွေကို gram, Lb (pound) အစရှိသဖြင့် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပြိး Weight တုံးတွေရဲ. အမျိုးအစားနဲ. ထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံ ၊ အရည်အသွေးတွေပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းအနိမ့်အမြင့်ကွာခြားပါတယ် ။
ဒီအချက်တွေက ကားဘီး Wheel Balance မညီတဲ့အခါ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေပါ ။ ဒီလိုအခြေအနေတွေက ကားဘီး Wheel Balance မညီတဲ့အခါမှသာမက တာယာလိမ်နေတာမျိုးစတဲ့ အခြေအနေတွေမှာလည်း ဒီလို အလားတူ ရောဂါလက္ခဏာတွေပြတတ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဒီလို ရောဂါလက္ခဏာတွေကြုံတွေလာရတယ်ဆိုရင် အလွယ်ဆုံး ကားတာယာကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီး စစ်ဆေးကြည့်တာမျိုးနဲ. ခေတ်မီကား Wheel Balance ချိန်စက်တွေနဲ. ဘီးတဘီးချင်းဆီကို တိုင်းတာစစ်ဆေးပြုပြင်သင့်တာပါ ။
ကား Wheel Balance မညီညာတာဟာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြဿနာလေးလို.ထင်ရပေမယ့် ၊ ကားကို အမြန်လမ်းလိုနေရာမျိုးမှာ အရှိန်နဲ. မောင်းနှင်နေတဲ့အချိန် ကားဘီးတွေရဲ. Wheel Balance မညီမျှမှုကြောင့် ကားမောင်းသူရော ၊ ကားရော အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အခြေအနေနဲ. ကြုံတွေလာရနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဒီလို ရောဂါလက္ခဏာတွေ ကြုံတွေလာရတယ်ဆို ကားအောက်ပိုင်း ပစ္စည်းတွေကို စစ်ဆေးပြုပြင်တာ ၊ ကား အလိုင်းမင့်ချိန်တာ ၊ ကားလေပေါင်ချိန်တာတွေအပြင် ၊ Wheel Balance တွေကိုလည်း သေချာ ဂရုတစိုက် မမေ့မလျှော့စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်လို. အကြံပြုတင်ပြလိုက်ရပါတယ် ။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေညီကို မောင်နှမများအားလုံး နည်းပညာ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝြပီး အန္တရာယ် ကင်းဘေးရှင်းကြပါစေ ။